China Excavator Hydraulic Cylinder fekitari uye vagadziri | Xinrun
1.Excavator akateedzana eiri kuita imwe bhaketi mhando hydraulic humburumbira inoshandiswa sekudzoreredza Linear inofamba actuator mu excavator hydraulic system. PC yakateedzana hydraulic humburumbira rudzi rwekuchera hydraulic cylinder chigadzirwa chakanyatso kuongororwa uye kugadzirwa neKomatsu neKayaba tekinoroji yeJapan. Iine hunhu hweakakwira kushanda kumanikidza, kuvimbika mashandiro, kumisikidza kumisikidza uye nekukatanura, nyore kugadzirisa uye bhafa mudziyo. Zvisimbiso zvese zveiyi yakateedzana ye hydraulic cylinder zvinotumirwa kunze zvisimbiso. Kumusoro kwepistoni tsvimbo yakaomeswa uye kuifukidza neyakaomarara chromium, uye hukasha mushure mekukorobha hunogona kusvika Ra0.08, Iyo cylinder musoro yekumwa Kayaba tekinoroji inonyanya kugadziridzwa zvinoenderana nemamiriro ekushanda evacheri. Izvo zvinhu iine ductile iron, uye iwo maviri magumo akaumbirwa neyakayerera bafa. Iyo ine yakanaka yekukanda kuita. Inonyanya kushandiswa kune yakasununguka PC nhepfenyuro yekuchera hydraulic uye mamwe ekuchera hydraulic anogadzirwa kumba nekunze.
2. Dhizaini yezvinhu zvekuchera hydraulic cylinder:
A. Iyo tsvimbo yepisitoni inogadzirwa nemhando yepasirese yakasimba-yakasimba simbi yesimbi. Iko pamusoro petsvimbo yepisitoni kunodzimwa nehuremu hwepakati kusvika kune kuomarara kukuru kweHRC62. Iyo pisitoni tsvimbo yepamusoro yakafukidzwa nerunyoro rwakaomeswa uye rwakakwenenzverwa kuti ipe simba risingadzivirire pamusoro penzvimbo kudzivirira pisitoni kubva pakudhonza uye kubhowa, Hupenyu hwakawedzerwa hwechisimbiso hune kuchengetedzeka kanokwana ka5 simba reyakaomarara pakamanikidzwa kumanikidzwa pane chidimbu chemuchinjikwa chikamu tsvimbo yepisitoni nepisitoni.
B. Ruoko rwekutungamira rwakagadzirwa neductile iron maererano nenzvimbo yekuchera. Yakagadzirwa nedular cast iron uye ine yakasimba yekupokana nemishonga. Iyo yakarongedzwa nekutsvedza inobereka inotorwa kubva kuJapan. Iyo yakanyanya kutakura kumanikidza kwekutakura ndeye 270n / mm2, iyo inesimba mutoro ndeye 140n / mm2, iyo yekumhanyisa kumhanyisa ndeye 5m / s, iyo kukakavara coefficient iri 0.02 ~ 0.07, iyo tembiricha inoshanda iri - 200 ° C kusvika 280 ° C, uye nzvimbo inotungamira inoderedza kushushikana kusvika padanho rekumira rakakura rekutakura mutserendende, Wedzera hupenyu hwesirinda nesimbiso.
C. Iyo pisitoni tsvimbo chisimbiso inoumbwa neguruva mhete, pisitoni tsvimbo chisimbiso mhete uye hydraulic bhaudhi, iyo inogona kunyatso kudzivirira hydraulic mafuta kuputika kwepiston tsvimbo. Iyo mhete yeguruva iri yakapetwa kaviri miromo-isina chiratidzo mhete. Basa rayo nderokudzivirira guruva, tsvina, jecha uye machipisi esimbi kuti zvisapinda. Iyo inodzivirira zvakanyanya kukwenya, inodzivirira chinhu chinotungamira uye inowedzera hupenyu hwebasa hwechisimbiso. Iyo yepakati yakatarisa yekuisa chisimbiso muromo inoderedza iyo yasara yemafuta mafirimu. Iyo polyurethane zvinhu inovimbisa yakanakisa hunhu mukuomesa kukakavara uye inowedzera kupfeka kuramba, Nekuda kwayo yakanaka kuramba kuzone uye nemwaranzi inokonzerwa nemamiriro ekunze, hupenyu hwebasa hwakareba. Tembiricha yekushanda iri kubva - 35 ° C kusvika 100 ° C, uye iyo velocity yepasi iri pasi pe2 m / s. Irin'i huru yekuisa chisimbiso yepisitoni tsvimbo ndeyemuromo mhando chisimbiso ine miviri yekuisa chisimbiso miromo uye yakasimba kukona padenga rekunze. Nekuda kwekuwedzera girizi pakati pemiromo miviri, inodzivirira zvakanyanya kupokana nekupfeka, inodzivirira kukanganisa uye extrusion, uye inovandudza kuita kwekuisa chisimbiso pasi pe zero kumanikidzwa. Iko kumanikidza kuri kuita 40MPa, iyo tembiricha inoshanda ndeye - 35 kusvika 110 ℃, uye iyo velocity yepasi isingasviki 0.5m / s. Iko kushanda kwe hydraulic buffer ndeyekutora iko kukanganiswa uye nekuchinja kwekumanikidza pasi pemutoro wakakura, tsaura yakanyanya tembiricha yemvura, uye kugadzirisa kugadzikana kwezvisimbiso. Iko kumanikidza kwepamusoro kunogona kusvika 100MPa. Nekuda kwenzvimbo yakasarudzika groove pamuromo unotsvedza iyo inogona kuburitsa kumanikidza kumashure, inogona kubvisa kumanikidza pakati pechisimbiso mhete uye bhaudhi yeinotakurika bhudhi tsvimbo, uye kuendesa kumanikidza kunoumbwa pakati pechisimbiso chikuru uye bhafa chisimbiso kudzokera system.
D. Iyo humburumbira inobereka yakagadzirwa nesimbi yesimbi 27SiMn ine simba rakakwira, diki chimiro uye huremu hureruka, yakakosheswa uye yakakungurudzirwa kusvika kumusoro kwepamusoro, kuitira kuti kudzikisira kupokana kwemukati nekurebesa hupenyu hwebasa hwechisimbiso.
E. Pisitoni yakajairika iko kukanda kune maviri maconcricity anokwana nepisitoni tsvimbo. Iyo pisitoni yakanyatsovharwa neshinda yekumonera pakati peiyo nati pisitoni nati, kuitira kuve nechokwadi chebasa rakavimbika pasi pekumanikidza kwakanyanya uye zvikamu. Zvese zvisimbiso zvepisitoni zvinotengeswa kunze kweParker neNOK zvigadzirwa. Ose maviri magumo episton akaisirwa ne4 mm gobvu tsvina mhete yakagadzirwa nePTFE. Sezvo iine basa rekunyudzwa kwekusachena, iyo oiri inogona kudzivirirwa kubva mukukuvadzwa nekuda kwekusanganiswa nezvinhu zvekunze, kuitira kuti ive nechokwadi chekuti chisimbiso chine hupenyu hwakareba hwebasa uye inogona kutamba inotungamira uye inotsigira basa. Iyo inotsigira mhete ine yakanyanya kumanikidza inotakura huremu, iyo inogona kubvisa zvese simbi kune simbi kusangana pakati pesitoni nesilinda block, inopa yakakwira lateral inobata inokwana, inotora kukanganisa, kuwedzera kusangana nzvimbo uye dzivisa kukwenya humburumbira block. Iyo pisitoni chisimbiso inotora yak yakavhurika mhando OK chisimbiso, icho chine zvakanakira kuramba simba kune rova ​​mutoro, yakaderera kukweshera kuramba uye nyore kuiswa. Nekuda kweakakosha mashandiro ezvinhu echisimbiso mhete, ine yakasimba anti extrusion kugona pasi pekumanikidza kukuru uye kubvumidzwa kukuru, uye iko kushanda kwekumanikidza kwakakwira se50MPa.
F. Iyo yekumisikidza ruoko ine tsvimbo mhango ndiyo yekumisikidza ruoko, iyo inogona otomatiki kugadzirisa iyo concentricity, uye nekuti kune hombe mukaha pakati peye buffer sleeve nepiston, yekutanga kumanikidza inogona kuderedzwa. Iyo buffer plunger inotora simbi bhora muganho, iyo inogona kuyangarara. Iyo buffer sleeve uye buffer plunger ine zvinoyangarara hunhu. Naizvozvo, inogona kuve neyakaganhurirwa diki buffer, inowirirana pakati nepakati uye kubvisa zvinokanganisa coaxial shaft kukanganisa. Iyo buffer performance yakanaka, iyo inogona kudzikamisa ruzha uye kukanganisa mutoro uye kuwedzera hupenyu hwebasa remuchina.
Zvadaro: HSG01-E Series Hydraulic Cylinder
Magetsi Hydraulic Cylinder
Hydraulic Cylinder Mhando
Diki Hydraulic Cylinder
Welded Hydraulic sepombi